Robert Jensen "Donald Trump ekweghị na New World Order" na-egosi: Jensen.nl bụ onye mmegide na-achịkwa: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 12 November 2019	• 7 Comments
isi mmalite: mediacourant.nl
Ọ ka dị mkpa ịkọwapụta etu esi emegide mmegide na-arụ ọrụ ka ị ghara ịgagharị na ụgbụ nchekwa steeti emepụtara. Robert Jensen na ebe nrụọrụ weebụ ya jensen.nl ụnyaahụ gosipụtara na ọ bụ ụdị egwu a. Lelee vidio dị n'okpuru ma chọpụta otu esi egwu egwu a. N'akwụkwọ ọhụrụ m a na-akọwa usoro niile nke aghụghọ, mana ọ dị mkpa ịhụ site na egwuregwu nke mmegide na-achịkwa. Site na nkeji 21e ị nwere ike ịhụ ka Jensen kpọrọ n'ezie Donald Trump dị ka onye nzọpụta nke ụwa megide iwu ụwa ọhụrụ. Ekwuru m njikọ a na echiche siri ike Donald Trump ihe aga aga na - 'edetu akara'
A na-atụkarị aro ka ị gụọ akụkọ a ọzọ, maka ịchọpụta otu esi ejikọta echiche siri ike na steeti akọwapụtara nke ọma site na ahịa dị mma. M kọwaziri otu akara aka nri ('rightwing' na Bekee) ga-emesi ụta maka nhụsianya niile site na ọgba aghara akụ na ụba.
Eziokwu ahụ bụ na Donald Trump emegideghị iwu ụwa ọhụụ bụ n'ihi na ọ bụ onye omere ọzụzụ zụrụ azụ (dịka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile), bụ onye ziri ezi maka ihe kpatara ya maka ọrụ a. Ọrụ ya bụ ime ka njiri mara ya ma doo anya. Centrallọ akụ etiti mba America (FED) enwetala ego mmachi ụgwọ ụgwọ ugwu oge n'okpuru akụ na ụba America. Bọmbụ a na-arụ ọrụ n'oge kwesịrị ekwesị, ọ ga-adaba na Ọdịda Anyanwụ financialwa n'ime ọgba aghara ego na mmekọrịta ọha na eze. Brexit debacle na-arụkwa otu ọrụ ahụ ma na-eme atụmatụ nke ọma tupu oge eruo. Ladmụ nwanyị ndị aka-nri na ụmụ amaala ndozi ndoro ndoro-ndoro ochichi nwere ike itinye aka na ịkpachapụ anya maka ụdị ngwa ahụ. Nke ahụ bụ ọrụ ha. Ọrụ ha kachasị elu bụ ya mere na ngọngọ ike nke ga-eweghachi usoro site na ọgba aghara ahụ nwere ike ịnagide nkatọ nke ijikọ ụwa ọnụ, ntụgharị akụkọ ihe mere eme, echiche mgbanwe ihu igwe na ihe ọ bụla nwere njikọ chiri anya na ika ahụ n'akụkụ aka nri n'okpuru aha nke izu nzuzo nke echiche. ". Palọ ndoro ndoro ọchịchị ugbu a jee ozi ya mere ebumnuche dị elu. Anyị nwere ike rịba ama otu ihe ahụ maka "ndị ọzọ" mgbasa ozi na-enyere ika a ọkụ. Ọ bụ ya mere m ji kpọọ mmegide (ndị gọọmentị na-achịkwa). Ha nwere ike na-akpọ ọtụtụ eziokwu, mana ha agaghị eme ihe ọ bụla; hụrụ ụkwụ, mana ọ dịghị mgbe ha gbuda n'okpuru ya.
Guo ihe nile banyere etu egwuru egwu gi na ihe igha ime ya, nkem akwụkwọ ọhụrụ.
Tags: ben, Donald, agba, je, Jensen, jensen.nl, akara, ọhụrụ, Robert, Rutte, trump, ebe, usoro ụwa
12 November 2019 na 16: 59
Jensen anabatala ha ka ha kpọọ egwuregwu nke mmegide na-achịkwa.
Ọ bụ ụlọ ihe nkiri niile ruo ọtụtụ puku afọ, ndị e weere na ha bụ ndị na-emegide ibe ha ma ha abụọ kwetara.
Ọ bụ anwụrụ ọkụ na enyo. Nwere ike ịhọrọ abụọ
nkebi. Ya bu n'etiti nwa nwoke nke edemede na nwa nwoke ozo nke edemede. Leftzọ niile aka ekpe, aka nri, ala azụ wdg na-eduga ha.
12 November 2019 na 21: 24
"Esemokwu Brexit na-arụkwa otu ọrụ ahụ ma na-eme atụmatụ nke ọma tupu oge eruo." kpọmkwem, n’ebe ahụ ha hụrụ igwe akwa a na-achọ ọkụ iji gbatịa ụgbọ ahụ. Na-eduzi ihe ga-abanye na abis ... Ebubeghi na ha ga-ahapụ ụlọ ọrụ EU NWO
Farage ebe okwu French RAVAGE bụ ihe dị n'okpuru ebe a ... na nke ahụ ka ọ ga-abụ ... oui oui Je maintiendrai
Enweghị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na slopi, snipers na gear gear ndị ọzọ
13 November 2019 na 10: 42
nyocha, onye na-akwụ ụgwọ na-ekpebi enweghị ụkọ ndị na-emekọ ihe ọnụ.
13 November 2019 na 12: 29
13 November 2019 na 17: 53
Naanị lee anya na pyramid ‘artistic’ doro anya ‘sketched’ n’azụ ya, nke na-agwa gị hoo haa onye ọ na-arụrụ ọrụ; )
13 November 2019 na 18: 11
Ihe na-akpasu iwe banyere ndị na-eme ihe nkiri ahụ bụ na ha dị oke mma na ya, kwenyesiri ike na ndị mmadụ na-abanye n'ubi.
Aghọtaghị m na e nwere ndị nwere ike iji Jensen kpọrọ ihe, ọ mara abụba n'elu, gịnị kpatara na ọ na-eyi ekweisi mgbe niile? Lee ihe egwuregwu ahụ bụ nwoke ahụ.
M na-eche na Jensen lekwasịrị anya na-agwa a nwantụrụ obere lekwasịrị ìgwè, na na ya na-ya na-ebipụta na YouTube.
21 November 2019 na 13: 10
" Mmegide a ha amalitela? Enyerelarị mmụọ ọgụgụ isi na 2018 dabere na ikpe Els Borst / Bart van U.
Ọnọdụ ndị uwe ojii nke na-adịghị njọ karịa Nazi Germany na-ekpughe dị ka wolf na uwe atụrụ ma ị hụghị ya »
Nleta nile: 14.745.031